Ukuba iiGofumadas zabafundi be-100 - ii-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2011 Internet kunye neBlogs, egeomates My
Eli nqaku libonisa iinkcukacha ezithathwe ukususela ngoJanuwari ukuya ku-Oktobha we-2011 kwi-Google Analytics, kwaye yenziwe lula kwimeko yokuba ngabafundi be-100 kuphela beli phepha. Kucacile ukuba kukubonakalisa umongo waseSpeyin, oya kuba yinto eyahluke kakhulu ukuba iphepha liba neyona nto ibalulekileyo kwiilwimi okanye kuluntu. Kodwa ukuba idatha ingaba luncedo kwiinjongo zokuthengisa, apha baya khona.
Ndenze uhlalutyo Izixeko ze-100 zama10 kumazwe, ukuziphatha okugqithiseleyo kunokuba yiMexico kangangoku ngoku idlula iSpain, isifundo esasiza kuthathwa njengento, ngokubhekiselele kubemi babemihluko ophawulekayo, nangona kungekho ekuxhumeni. Kukho ukunqatshwa okubonakalayo kwintetho yesiNgesi, ngenxa yokuba Phuma kakuhle i-monopolizes uphando olongezelelweyo lwe-Anglo-Saxon imo emele iMelika, i-United Kingdom, i-Australia kunye ne-Indiya.
Oku kuya kuba ngumsebenzi welizwe.
I-12 Baya kuza kwamanye amazwe
Ukuba imilinganiselo yayikuzixeko:
Ukuziphatha yahluke gqitha, kuba nangona kumazwe 8 zenza ukuba 88% kwezithuthi kokufika, ngokwemigaqo emizini imizi emikhulu 10 kunzima ukufikelela 33%, nto leyo ebonisa ukuba umongo kokufika kukho izithuthi eliphezulu emizini ezingenazo iinqununu Kukho kwakhona ezimdaka yabangela e Tegucigalpa, ezo ke enkulu enxulumene ngaphezu Guatemala kodwa ukuba isiza ezizalelwa kule lizwe, kuzisa ezininzi zendlela Google.hn saa izihloko kusukela othandweni ingcebiso kwisixeko iphonografi. Ukuba ubize Lima ingqalelo apho umguquli eGeomate uhlala kwaye akufanelekanga ukuba kubangele ubugqwetha-manani, kodwa apho kukho imincili umba umdla geospatial nangenxa kweli lizwe a uphawu abafudukayo ukusuka emaphandleni ukuya umzi omncinane ngaphantsi kwe yingozi
I-7 iya kuba yiLima
4 evela eMexico City
2 yeBuenos Aires
2 evela eBarcelona
2 ka Quito
I-67 yayiza kuzo zonke iidolophu zehlabathi
I-40 iya kusebenzisa i-Internet Explorer
I-29 iya kuthanda i-Firefox
I-27 yayiya kutshintshela kwi-Chrome
I-2 iya kusebenzisa i-Safari
1 Ndiya kusebenzisa i-Opera
I-1 iya kuba yintsikelelo esebenzisa iindlela ezincinane ezifana ne-Agent ehambisanayo ye-Mozilla kwi-mobiles, i-Android navigator, i-Opera Mini, i-Intanethi Explorer kunye nesakhelo se-Chrome kunye ne-RockMelt.
Nantsi sibona indlela i-Chrome iqhubeka ngayo ukuphumelela iindwendwe, Ndathetha ngaloo mihla embalwa edlulileyo Ndicinga ukuba kwiminyaka emininzi iya kufikelela kwiFoodfox kungekhona ngenxa yokuba ilahlekelwa ukutyelelwa kodwa kuba i-Intanethi Explorer ayiyi ku-28%.
Kwimeko yemfuno apho abasebenzisi bafika khona:
I-15 iya kukwenza kwi-AutoCAD
8 nguGoogle Earth
6 ngu-UTM ulungelelanisa izihloko
6 yi-ArcGIS okanye i-ArcView
I-36 iya kukwenza ngokuhlanganiswa okuhlukeneyo, phakathi kwezi zihloko zibandakanyiweyo kodwa kungekhona ngelizwi elichanekileyo kwibinzana lokukhangela. Kule nto ndaqala ukwenza inqaku elikuthelekisa xabiso ukuba isofthiwe inayo kwi Geofumadas.
Ukuba bekuyiyo inkqubo yokusebenza
Nantsi sibona ukuba iMac isisigqeba samancinci, nangona kungekho i-movie ye-Hollywood apho umntu angaboniswa khona. Kwakhona kubonakala ukuba i-traffic traffic iyingcosana.
95 iya kusebenzisa iWindows
I-2 iya kusebenzisa i-Macintosh
I-1 iya kusebenzisa inkqubo yeselula
Ukuhanjiswa kwe-1 usebenzisa iipulatifomu zeselula
Ngalolu cala liyaziwa ngendlela i-Mac elawula ngayo imarike yeselula, ukuba sicinga ukuba ngabantu be-100, i-72 isebenzisa amadivayisi ase-Apple xa songeza i-iPad, i-iPhone ne-iPod. Ukuba umgangatho kukuba idesksi iya kuthunyelwa kwizixhobo eziphathekayo, izixhobo kwaye siza kuxhomekeka ngakumbi kwiwebhu, kwaye i-giant elandelayo iya kuba yi-Mac, ngumcimbi wexesha kunye nefa lika-Steve Jobs.
I-45 iya kuyenza nge-iPad
18 usebenzisa i-Android
4 ngokumangalisayo usebenzisa i-iPod
4 usebenzisa i-SymbianOS
I-1 isebenzisa i-Nokia
Ukujikeleza akufikeleli kwi-1 esele isasazwa phakathi kwabo basebenzisa iWindows Mobile, i-Sony kunye ne-Samsung.
Ndingomnye wabathathu abaxhuma kwilizwe elivela kwiluhlu lokuqala.
Enye yeebini ezivela kwisixeko kwisihlomelo sesibini
Ngokungafani nabafundi, ndingumlobi kwaye njengamanje ndisebenzisa i-AutoCAD ngokungakumbi njenge-Microstation, i-gvSIG ngaphezu kwe-ArcGIS, i-Google Earth / Maps ... imihla ngemihla.
Omnye we-27 osebenzisa i-Chrome njengesiphequluli
Omnye we95 osebenzisa iWindows, nangona ndidibanisa kakhulu kwi-mobile.
Omnye we45 osebenzisa i-iPad.
Eli nqaku liyasikhumbuza ukuba singabantu abanelungelo elixhuma kwiidolophu ezixhunyiwe, ukuba sibonakala kwiluhlu. Ukuba inkqubo yethu yokusebenza, ilizwe okanye isixeko asibonakali khona, kunelungelo elingaphezulu. Kwimizekelo amaninzi enye yeyona ncinane yendawo esebenzisa isofthiwe kunye nezixhobo zezinto ezininzi, oku kwenzeka ntoni kum.
Post edlulileyo«Edlulileyo Indlela yokwazi iphasiwedi yefayile yefayili
Post Next Kmzmaps, iimephu zeGoogle Earth ezibalabalaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 "Ukuba ii-Geofumadas zabafundi be-100"
IPad kunye ne-Android?
Ndingomnye weColombia 8
Enye ye4 yaseBototá
Enye ye-36 efika ngezizathu ezahlukeneyo.
Omnye we2 osebenzisa iLuxux.
Kwaye enye ye-18 esebenzisa i-Android.